chhalphal News - पोर्चुगलमा नेपाली राजदुतावास अत्यावश्यक भएको छः कुबेर कार्की, अध्यक्ष गैर आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वयन परिषद, पोर्चुगल
पोर्चुगलमा नेपाली राजदुतावास अत्यावश्यक भएको छः कुबेर कार्की, अध्यक्ष गैर आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वयन परिषद, पोर्चुगल
आइतबार, ३० पुष २०७४, १४ : ०५
पोर्चुगलमा एनआरएनको शुरुवात कहिले भएको हो ?
पोर्चुगलमा एनआरएन २००६ मा स्थापना भएको हो । त्यतिबेला यहा हामी थोरै संख्यामा नेपालीहरु थियौं । त्यतिवेलाको डाटा अनुसार ५ सयको हाराहारीमा नेपालीहरु थिए । अहिले पोर्चुगलमा २० हजारको हाराहारीमा नेपालीहरु रहेको अनुमान गरिन्छ । गैर हावासीय नेपाली संघले धेरै कुराहरुमा नेपालीहरुलाई साथ र सहयोग गर्दै आएको छ । मुख्यत नेपालीहरुलाई पासपोर्टसम्बन्धी समस्यामा फ्रान्समा रहेको राजदुतावाससँग समन्वयन गरेर काम गर्नेगरेका छौं । पोर्चुगललाई कर्म थलो बनाएर आएका नेपालीहरुको हरेक समस्यामा एनआरएनले साथ र सहयोग गर्दै आएको छ ।
नेपालीहरु कुन कुन देशबाट पोर्चुगल आएको पाउनुभएको छ?
विगतका बर्षहरुलाई हेर्दा नेपालीहरु युरोपी अन्य मुलुक जर्मनी, बेल्जीयम, हलायण्ड र डेनमार्क लगायतका मुलुकमा स्टुडेन्ट भिषामा आउने र भिषाको कार्यकाल सकिएपछि पोर्चुगल छिर्ने रेको पाईएको छ । पोर्चुगल सरकारले बिगत केहि बर्षदेखि स्थायी बसोवासका लागि कहि खुकुलो गरेकोले नेपालीहरु पोर्चुगलमा आएर काम गर्ने र ८,१० महिना काम गरेको ट्याक्स बुझाएपछि अस्थायी बसोवासको कार्ड पाउने गरेका छन् । युरोपको अन्य देशमा भन्दा पोर्चुगलमा कार्ड पाउन सजिलो भएकोले नेपालीहरु पोर्चुगलमा आकर्षित भएका छन् ।
पोर्चुगलले नेपालीलाई मात्र हो की अन्य देशका नागरिकलाई पनि अस्थायी बसोवासको लागि खुकुलो गरेको छ ?
पोर्चुगलले ब्राजिल, अमुला, मकाउलगायतका मुलुकलाई अस्थायी बसोवासको व्यबस्था गर्ने शुरुवात गरेको थियो । पछि अन्य मुलुकका आप्रवासीलाई पनि अस्थायी बसोवासको लागि खुकुलो गरेको हो । पोर्चुगलका युवा जनशक्ति युरोपका अन्य मुलुकमा जाने भएकोले पोर्चुगललाई दक्ष जनशक्तिको अभाव पनि छ । त्यसैले पनि पोर्चुगल सरकारले आप्रवासीसम्बन्धी केही उदार नीति लिएको हो ।
नेपालको मेनपावर पोर्चुगल भित्रिदा पोर्चुगिस सरकारलाई त राम्रै हुने भयो नेपाल सरकारलाई के असर गर्छ ?
यस्ले नेपाल सरकारलाई कुनै असर गर्दैन । किनभने नेपालीहरु अवसरको खोजिमा बिदेश जाने गरेकै छन् । तर योजनाबद्ध रुपमा पोर्चुगलमा नेपाली पठाउने काम भने अझै हुन सकेको छैन । यदि सरकारकै पहलमा पोर्चुगलसँग समन्वयन गरेर नेपाली जनशक्ति पठाउन सकेका नेपालीलाई यो राम्रो अवसर हुन सक्दछ । पोर्चुगलको अर्थतन्त्र टुरीज्जम र कृषि व्यवसायले धानेको छ । यहाँ युरोपका अन्य मुलुक र अमेरिकन मुलुकबाट निकै पर्यटक यहाँ आउने गर्दछन् । त्यसैगरी कृषि पनि पोर्चुगलमा व्यवसायीक हिसावले निकै राम्रो व्यवसाय मानिन्छ । यहाँ करिव ४, ५ हजार नेपालीहरु कृषिमा काम गर्नुहुन्छ । कतिपय नेपालीहरुले कृषिलाई नै व्यवसायको रुपमा अगाडि बढाएर उल्लेख्य प्रगति गरेका छन् । यस्लाई नेपाल सरकारले अहिलेसम्म प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लाभ लिन सकेको छैन । केहि बर्ष अगाडि केहि नेपालीहरु वर्क प्रमिट लिएर यहाँ आएको भए पनि यो व्यबस्थित हुन सकेको छैन ।
यस्लाई ब्यवस्थित गर्न यहाँ सरकारको उपस्थित हुनु जरुरी छ । अहिले युके पछि सबैभन्दा धेरै नेपाली रहेको मुलुक पोर्चुगर्ल हो । त्यसैले पनि यहाँ नेपाली राजदुतावासको स्थापनाको लागि हामीले पहल गरिरहेका छौं । म यसै अन्तरवार्तामार्फत पनि नेपाल सरकारसँग के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने पोर्चुगलमा भएका नेपालीहरुको समस्या समाधानको लागि, नेपालीहरुको अवसरका लागि र पर्यटन बिस्तारको लागि पनि नेपाल सरकारले सके सम्म चाँडो पोर्चुगलमा राजदुतावास स्थापना गर्न म आग्रह गर्दछु ।
तपाईले पर्यटन र कृषि पोर्चुगल अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो भन्नुभयो । नेपालमा पनि पर्यटन र कृषिमा प्रसस्तै सम्भावना रहेको छ । यहाँको अनुभवलाई नेपालमा लागु गर्न एनआरएनले कुनै पहल गरेको छ ?
यहाँको सरकारले पर्यटन व्यवसायलाई धेरै व्यबस्थित गरेको छ । पर्यटकलाई आकर्षक गर्न यहाँका पुराना भवनहरुलाई संरक्षण गरिएको छ । यहाँ १ जना पर्यटक आउदा सरकारलाई ट्याक्स त बुझाउछ नै सँगै होटल व्यवसायीले पनि १ जना पर्यटकलाई सेवा दिएवापत सरकारलाई पनि १ युरो ट्याक्स बुझाउने गर्दछ । यसरी सरकारले यो व्यवसायबाट फाईदा लिन सकेको छ । यहाँ आउने पार्यटकलाई पनि नेपालको पर्यटकिय क्षेत्रको बारेमा जानकारी दिन सके नेपाललाई प्रत्यक्ष फाईदा हुन सक्छ । एनआरएन र यहा रहेको अवैधानीक दुतावासले यो पहल त गरेकै छ । नेपालमा टुरिज्जम प्रमोट गर्नको लागि राजदुतावासकै आवस्यक देख्दछु । राजदुतावास भएमा यहाँको सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष सरकेकार राख्न सक्दछ । हामिले जतिसुकै प्रयास गरेपनि हाम्रो पहुँच त्यहासम्म नपुगेको हो की भन्ने फिल मैले गरेको छु ।
पर्यटन आकर्षण गर्न पोर्चुगलमा भएका प्रयास र नेपालमा भएका प्रयसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
हाम्रो देश पर्यटकीय हिसावले प्रसस्तै सम्भावनाहरु छन् । हुन त ०७२मा गएको भूकम्पले यस्मा केहि क्षेती भयो । तर पुरातत्व बिभागले केहि ऐतिहासिक क्षेत्र र भवनहरुलाई पुरानै संरचना अनुसार निर्माण गर्न पहल गर्नुपर्दछ । यस्मा सरकारले पनि पहल गर्नुपर्दछ ।
पोर्चुगलमा नेपालीको संख्या बढ्दै जाँदा नेपालीबाटै नेपालीहरु लुटिने गरेका समाचारहरु पनि आईरहेका हुन्छन् । यस्मा नयाँ आउने नेपालीहरुलाई तपाईको सुझाव के छ ?
पछिल्लो समय पोर्चुगल पठाँउछु भनेर नेपालमै नेपालीलाई ठग्ने गरेको पनि पाईन्छ । यस्मा सबै चनाखो हुनुपर्दछ । पोर्चुगलमा भएका आफन्त वा एनआरएन मार्फत पनि बैधानिकतासम्बन्धी बुझ्न सकिन्छ । र पोर्चुगल आईसकेपछि दुख पाएका , काम नपाएका कुलतमा फसेका नेपालीहरुलाई एनआरएनले उद्धार गर्ने गरेको छ ।
अन्त्यमा पोर्चुगलमा रहेका नेपाली र पोर्चुगल आउन चाहने नेपालीहरुलाई तपाईको केहि संदेश छ ?
पहिलो कुरा त पोर्चुगलमा भएका सम्भावनाहरु नेपालमा पनि छन् । पढेलेखेका युवाहरुलाई नेपालमै भबिष्य खोज्न आगैह गर्दछु । सम्भव भएसम्म नेपालमै केहि गरौं, तर पोर्चुगल नै आउन चाहनुभएको हो भने यो नेपालीको लागि राम्रो गन्तव्यचाँही हुनसक्छ । जुन परिकल्पना गरेर धेरै खर्च गरेर आउदा भने समस्या पर्न सक्छ । यहँ धेरै कमाई भने हुँदैन । यस्मा ध्यान दिनुहोला । हावापानीको हिसावले नेपालसँग मिल्देजुल्दो भएकोले केहि सिप भएकाले यहाँ राम्रो गर्नपनि सक्छन् । यहाँ रहेका नेपालीहरुको हकमा त हामीहरुले एनआरएनको मार्फतबाट सक्दो सहयोग गरेकै छौं । कुनै समस्यामा परेमा एनआरएनलाई संझन सक्नुहुन्छ भन्न चाहन्छु ।
नेपालको शान्ति प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक आन्दोलन अनौठो कथाजस्तो छः प्रधानमन्त्री ओली
सभापति शेरबहादुर देउवामा कांग्रेसलाई अगाडि लैजाने ईच्छाशक्ति नै भएनः डा. शेखर कोइराला
म विदेश गइन, गलत गरेँः राजन गोदार
सन् २०२५ सम्म अष्ट्रेलिया नेपाली विद्यार्थीहरुको लागि शैक्षिक गन्तव्य हुन सक्छ
समावेशी र साझा इक्यान मेरा एजेण्डा हुन् : सपना राजभण्डारी
‘स्मार्ट इक्यान मेरो लक्ष्य हो, इक्यानीयनलाई न्याय गर्न सक्छु’ –शेषराज भट्टराई